Nka na omenka | Nleta Hultsfred
hem » Hụ & mee » Ebe nkiri ndị njem » Arts & nka
Ụlọ ihe ngosi nka, ụlọ ngosi nka, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ụlọ ihe nkiri na-enye Hultsfred ndụ nka dị mkpa. Oke ahụ na-egosi obosara na omimi ebe nka na akụkọ nka nke oge a nwere uru nhata.
Onye na-ese foto na onye omenkà Emma Jansson
Ose foto na omenka Emma Jansson: Aha m bụ Emma Jansson. Mụ na onye òtù ọlụlụ na nke anyị bi n'otu ugbo dị na mpụga Hultsfred na Småland
Lọ ahịa ahụ dị nso na Hotell Dacke na Virserum. Ngwaahịa mpaghara na mpaghara. Crafts, handicraft, udi na imewe. Osisi, textiles, ceramics, ajị, iko na ọtụtụ ndị ọzọ
Foto na usoro ihe osise ochie Geertjan Plooijer ọkachamara na-ese foto / omenka. Ọ si n'ebe ugwu Friesland na Holland mana ọ bi ma na-arụ ọrụ na Mörlunda. Ọ
On a obere ugwu, na mara mma echiche, na obodo nta nke Tälleryd n'èzí Vena bụ ugbo Nybble. N'ime ọmarịcha Lillstugan, ihe okike na-aga na ụlọ ọrụ ihe nkiri Steve Balk.
… ..A masiri m ite agba ma dọrọ ndụ n’ezie ebe ọ bụla m nọ. Annika amụrụ ma zụlite na Vagnhärad, Södermanland na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30
Stinsen nka na nka
Ins ga ahụ Stinsen nka na nka na mpaghara “Bolaget” na Virserum. N’ebe a ka enwere ihe ngosi na ire ahia nka, nka, ihe ndi ozo, oru osisi, akwa na seramiiki
N'etiti oke ọhịa nke Småland bụ obere obodo Virserum nwere nnukwu ụlọ ọrụ ihe nka. Site na mpaghara ngosi nke 1600 sqm, a na-egosipụta ihe ngosi nke oge a na ihe ngosi
Emil na ihe osise Lönneberga
E bipụtara akwụkwọ mbụ Astrid Lindgren banyere Emil na Lönneberga na eserese Björn Berg na 1963 ma mmadụ niile hụrụ ya n'anya ngwa ngwa. Emil na egwuregwu ya
Nwee ogige square mita 4 na Skallagrim - Gerts Trädgårdsgalleri nke ihe ruru 000 ihe a kpụrụ akpụ na ụrọ, arịa okwute, poselin, osisi na ọla kọpa. Ebe a
Na ebe nchekwa nke Nils Dacke na ihe omume Dackefejden, akpụrụ akpụrụ akpụ a na 1956 site n’aka Nils Dacke. Onye na-ese ihe bụ Arvid Källström mere ihe a kpụrụ akpụ ka Nils Dacke mee
Bo Lundwall, onye amụrụ na Hultsfred na 1953, nwere ụlọ ihe nkiri ya na ụlọ ya na ezinụlọ ya, Hultsfreds Gård, nke malitere na narị afọ nke 1600 na nke 1700. Bo guru akwukwo
Galleri Kopparslagaren, Rallarstugan na Glaspelleuset bụ ụfọdụ n'ime ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme bara uru na agbata obi. N'akụkụ Storgatan dị n'etiti Hultsfred, e nwere ụlọ ndị nwere nnukwu